China mepere oke ya mgbe 85% nke ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » China mepere oke ya mgbe 85% nke ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Gao Fu, onye isi nke Center for Control and Prevention Disease
Ọ bụrụ na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ruru ihe karịrị 85% na mbido 2022, a ga -enwe ọrịa ole na ole na ọ nweghị onye ọ bụla butere ọrịa ahụ ga -anọ n'ọnọdụ siri ike ma ọ bụ nwụọ.
Ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi nke ndị China nwere ike iru karịa pasent 85 na mbido 2022.
Usoro nchịkwa ọrịa na -efe efe ugbu a na China emeriela oge dị ukwuu imepụta ọgwụ mgbochi zuru oke yana ịgbara ndị mmadụ ọgwụ.
Site na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi 85%, ọnụọgụ na ọnwụ nke COVID-19 ga-adị ka nke flu.
Dị ka onye isi ọchịchị si Ụlọ Ọrụ China maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa, China nwere ike mepee oke ya site na mbido 2022, ma ọ bụrụ na ọ gbaa ọgwụ mgbochi karịa 85% nke ndị bi na ya.
Usoro mgbochi ọrịa na-efe efe ugbu a megide COVID-19 n'ime China Ha emeriela oge dị ukwuu imepụta ọgwụ mgbochi zuru oke yana inoculate ndị mmadụ, Gao Fu, onye isi ụlọ ọgwụ Ụlọ Ọrụ Maka Ọchịchị na Mgbochi Ọrịa, kwuru.
Na mgbakwunye, ịdị ike nke coronavirus na -ebelata, dị ka Gao si kwuo.
"Ka ọ na -erule n'oge ahụ, gịnị kpatara na anyị agaghị ekwupụta obi m?" onye ọrụ gọọmentị kwuru.
Mgbe ọnụ ọgụgụ ndị na -egbu egbu na ọnwụ nke Covid-19 dị ka nke flu, ọ dịkwa ka ọ ga-adịrịrị na mmadụ, mbọ iwepụ nje a ga-abụ agha ga-adịte aka, ka o kwuru.
"N'okwu ahụ, anyị kwesịrị ịga n'ihu na -agba ọtụtụ mmadụ ọgwụ mgbochi, mepụta ọgwụ mgbochi ọhụụ, ọkachasị mepụta ọgwụ dị irè."